UZebulon Pike kunye neMiboniso Yakhe eNtshona
Uvavanyo lukaPike lwaluneenjongo ezimangalisayo kwaye luhlala luphazamisekile kulolu suku
Ijoni kunye nomphenyi uZebulon Pike ukhunjulwa ngeendlela ezimbini ezikhokelela ekuhloliseni intsimi efunyenwe yi-United States e- Louisiana Purchase .
Ngokuqhelekileyo kucinga ukuba wenyuka ePike's Peak, entabeni yaseColorado egama layo. Akazange afinyelele kwiintlanganiso zeentlanzi, nangona wahlola kwiindawo ezikuloo ndawo.
Ngandlela-thile, uhambo lukaPike olusentshonalanga luphela kuLee no-Clark .
Nangona kunjalo iinzame zakhe zihlala zifihliwe ngokuzibuza imibuzo malunga nezizathu zokuhamba kwakhe. Wazama ukuthini ukufeza ngokuhamba ngeenxa zonke kwi-West eyayingakafundiwe?
Ngaba wayengumhloli? Ngaba wayenemiyalelo eyimfihlo yokukhupha imfazwe neSpeyin? Ngaba wayeyindoda ekhuselekileyo yeArmey ifuna i-advent while izalise imephu? Okanye ngaba wayezimisele ngokwenene ukwandisa imida yesizwe sakhe?
Umsebenzi wokuPhonononga amaNxweme aseNtshona
UZebulon Pike wazalelwa eNew Jersey ngoJanuwari 5, 1779, unyana wegosa e-US Army. Xa wayesemncinci uZebulon Pike wangena emkhosini njenge-cadet, kwaye xa wayeneminyaka engama-20 ubudala wanikezwa i-commission yekhomishana njengomloli-tyala.
UPike wathunyelwa kwiindawo ezininzi ezingasemngceleni osentshonalanga. Kwaye ngo-1805 umlawuli we-US Army, uGeneral James Wilkinson, wanikela uPike isabelo sokuhamba ngasentla waya kuMlambo waseMisissippi eSt.
ULouis ukufumana umthombo wamanzi.
Kuza kuboniswa kamva ukuba uGeneral Wilkinson wayenamathembeki. UWilkinson wayala i-US Army. Nangona kunjalo wayefumana ngokufihlakele iintlawulo ezivela eSpain, okwakunjalo ngexesha elininzi kwiindawo ezisemzantsi-ntshona.
Uhambo lokuqala apho uWilkinson wathumela uPike, ukufumana umthombo woMlambo waseMississippi ngo-1805, unokuba nesisusa esiphezulu.
Kucingelwa ukuba uWilkinson wayenethemba lokuvusa ukungquzulana neBrithani, elalilawulwa eCanada.
I-Exke ye-First Western Expedition yasePike
UPike, ekhokela iqela lamajoni angama-20, wasuka eSt. Louis ngo-Agasti 1805. Waya kwimini yanamhlanje, echitha ubusika phakathi kweSioux. UPike wayelungiselela umnqophiso kunye neSioux, kwaye ipapashwe kakhulu kummandla.
Xa kufike ubusika, wagxininisa kunye namadoda ambalwa waza wazimisela ukuba iLake Leech yayiyimvelaphi yomlambo omkhulu. Wayephosakele, iLake Itasca ngumthombo we-Mississippi. Kwakukho ukusola ukuba uWilkinson akazange akhathalele ngokwenene umthombo wangempela womlambo, njengokuba unomdla wokwenene ukuthumela iprobhethi ngasentla ukuze ubone indlela abaseBrithani ababeza kwenza ngayo.
Emva kokuba uPike abuyele eSt. Louis ngo-1806, uGeneral Wilkinson wayenesinye isabelo kuye.
I-Pike ye-Second Western Expedition
Uhambo lwesibini lukhokelwa nguZebulon Pike luhlala ludideka emva kweeminyaka ezimbini. UPike wathunyelwa ngasentshonalanga, kwakhona nguGeneral Wilkinson, kunye nenjongo yohambo luhlala luyimfihlakalo.
Isizathu esilungeleyo sokuba uWilkinson uthumele iPike ukuya eNtshona kuhlolisise imithombo yoMlambo Olubomvu kunye noMlambo waseA Arkansas. Kwaye, njengoko iUnited States yayisanda kuzuza i-Louisiana Purchase esuka eFransi, ngokuqinisekileyo uPike wayefanele ahlolisise aze abike kumazwe kwicandelo elisentshonalanga ekuthengeni.
UPike waqalisa umsebenzi wakhe ngokufumana iimpahla eSt. Louis, kwaye ilizwi lakhe lohambo oluzayo luye lwaphuma. Ibutho leSpeyin lakwabiwa kwi-Pike yesithunzi njengoko yafudukela ngasentshonalanga, mhlawumbi ize imyeke ukuhamba.
Emva kokushiya iSt. Louis ngoJulayi 15, 1806, kunye nabamahashe baseSpain bebonakala bemthungela kude, uPike waya kwindawo yangoku ePueblo, Colorado. Wazama waza wahluleka ukunyuka entabeni eya kuthiwa yi- Pike's Peak .
UZebulon Pike Uqhutyelwe kwiindawo zaseSpanish
UPike, emva kokuhlola kwiintaba, waphendukela ngaseningizimu, waza wahola amadoda akhe kwintsimi yaseSpeyin. Iqela lamasosha aseSpain lafumana uPike kunye namadoda akhe ahlala kwinqanaba elingenanto elaliyakhayo emithini ye-cottonwood kwiibhanki zaseRio Grande.
Xa inselele ngamajoni aseSpain, uPike wachaza ukuba wayekholelwa ukuba wayemise inkampu kunye noMlambo Olubomvu, kwindawo engummandla wase-United States.
I-Spanish yamqinisekisa ukuba wayeseRio Grande. I-Pike yanciphisa ifulegi yaseMerika ihamba ngeenqaba.
Ngelo xesha iSpeyin "yamenywa" iPike ukuba ihambe nabo baya eMexico, kwaye uPike kunye namadoda akhe bahanjiswa eSanta Fe. UPike wayebuzwa yiSpeyin. Wabambelela kwibali lakhe ukuba wayekholelwa ukuba wayehlolisise kwintsimi yaseMerika.
UPike waphathwa kakuhle yiSpeyin, owathumela yena namadoda akhe ukuya eChihuahua, ekugqibeleni wabakhulula ukuba babuyele eUnited States. Ehlotyeni ka-1807 iSpeyin yahambela eLouanaana, apho wakhululwa khona, wabuyela ngokuphepha eMhlabathini waseMelika.
I-Zebulon Pike Ibuyiselwe e-American phantsi kweNkundla yokuTyala
Ngeli xesha uZebulon Pike wabuyela eUnited States, izinto zatshintshile ngokuphawulekayo. Isicwangciso esicetywayo esenziwe nguAaron Burr ukuba sithathe indawo yaseMerika kwaye sakha isizwe esahlukileyo eMzantsi-ntshonalanga sasiveziwe. UBur, owayengumongameli wongameli, kunye nombulali ka-Alexander Hamilton , wahlawuliswa. Kwakhona kwakubandakanyeka kwisicwangciso esicetywayo nguJenifer James Wilkinson, indoda eyayithumele uZebulon Pike kwiihambo zakhe.
Uluntu, kunye nabaninzi kurhulumente, kubonakala sengathi uPike usenokudlala indima ebomvu kwi-conspiracy yeBurr. Ngaba uPike wayengumhloli weWilkinson noBurr? Ngaba wayezama ukuvusa iSpeyin ngandlela-thile? Okanye ngaba wayesebenzelana ngokufihlakeleyo kunye neSpeyin kwisiqhelo esithile malunga nelizwe lakhe?
Esikhundleni sokubuya njengomhloli wamaqhawe, uPike wanyanzelwa ukuba acime igama lakhe.
Emva kokuvakalisa ukungabi namacala, amagosa karhulumente agqiba ekubeni uPike wayemnyanisekile.
Waqala kwakhona umsebenzi wakhe wemikhosi, waze wabhala incwadi esekelwe ekuhloliseni kwakhe.
Ngokuphathelele u-Aaron Burr, wahlawuliswa ngetyala kodwa akazange aphumelele kwindlela uJennifer Wilkinson angqina ngayo.
UZebhulon Pike Waba Yimfa Hero
UZebulon Pike uphakanyiswe ukuba ube ngowona mkhulu ngo-1808. Ngokugqitywa kweMfazwe ka- 1812 , uPike wakhuthazwa ngokubanzi.
Jikelele uZebulon Pike wayala amabutho aseMerika ahlasela iYork (ngoku iToronto), eCanada entwasahlobo ka-1813. UPike wayekhokelela ekuhlaselweni kwidolophini ekhuselekileyo kwaye iBrithani eyayihoxayo yavusa i-magazine powder ngexesha lokubuyela kwabo.
UPike wahlaselwa yinqanawa lelitye elaphula umqolo wakhe. Wayeyiswa kwinqanawa yaseMerika, apho wafa ngo-Aprili 27, 1813. Imikhosi yakhe yayiphumelele ekuthinzeni idolophu, kwaye ifulethi yaseBritani eyayibanjwe yafakwa phantsi kwentloko yakhe ngaphambi kokuba afe.
Ifa likaZebulon Pike
Xa ecinga ngezenzo zakhe zobuqhawe kwiMfazwe ka-1812, uZebulon Pike wayekhunjulwa njengemfazwe yempi. Kwaye ngo-1850 abahlali kunye nabathengi baseColorado baqala ukubiza intaba wadibana nePike's Peak, igama elibanjwe.
Nangona kunjalo imibuzo malunga neendlela zakhe zihleli. Kukho iingcamango ezininzi malunga nokuba kungani uPike ethunyelwa eNtshona, kwaye nokuba ukuhlola kwakhe kwakungumsebenzi wobuqili.
5 Iimfundiso malunga neTransinal Railroad
Impumelelo kunye nokungaphumeleli kweDentente kwiMfazwe yamaCold
Ukhetho lwe-1828 lubekwe uphawu lweeTactics ezingcolileyo
Imbali enemibala yeParade yeSt
Yiyiphi Iprojekthi Yokwakha Yesiqhelo Eyona Mhle
I-Falloir-kufuneka ibe yimfuneko
Ukuba Ufana noMamford & Amadodana ...
Yintoni yokugqoka kwiSinagoge
Iingcamango Zokuzonwabisa Abantu Bakho Iibhasi zeBingo - dwelisa uNombolo 3
I-Word Order in Izivakalisi zesiNgesi
INqununu vs Umgaqo: Amagama aqhelekileyo adidekile